तपाइले देख्नु भएको यी ५ सपनाहरु झुक्किएर पनि कसैलाई नसुनाऊनुस् – Jagaran Nepal
तपाइले देख्नु भएको यी ५ सपनाहरु झुक्किएर पनि कसैलाई नसुनाऊनुस्
३. सानो माछा देख्नु भएमा :माछालाई देवताको प्रतिक समेत मान्ने गरिन्छ। यदि सपनामा सानो माछा पकाएको वा खाएको देख्नुभएमा यसको मतलब तपाईलाई आकस्मिक धन लाभ हुनुको साथै सुख प्राप्ति हुने गर्छ।४. साँप देख्नु भएमा :सपनामा साँप देख्दा जो कोहि डराउने गर्छन वा घृणा गर्न सक्छन तर यसरी सुतेको समयमा साँप देख्नु अन्यन्तै शुभ मान्ने गरिन्छ। यदि तपाईलाई साँपले लखेटेको ,घेरेको वा टोकेको देख्नु भएमा यो जान्नुहोस् कि तपाईको जीवनमा ठूलो मान-सम्मान,धन प्राप्त गर्नुका साथै तपाईका हरेक कदम प्रगति उन्मुख हुनेछन्।